Shariif Xasan oo sheegay in maanta lagu sameeyay is-hor istaag uusan fileyn. – XAMAR POST
Shariif Xasan oo sheegay in maanta lagu sameeyay is-hor istaag uusan fileyn.
Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Koofur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo Maanta loo diiday in uu ka safro garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, xilli uu ku wajahnaa Magaalada Baydhabo, ayaa waxaa uu faah faahin ka bixiyay waxa uu salka ku hayay safarkiisa.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa tilmaamay in maanta lagu sameeyay ishor istaag uusan fileyn islamarkaana loo diiday in uu ku safro diyaaradii isaga u kireysneyd.
Sidoo kale, waxaa uu sheegay mar uu warbaahinta muqdisho kula hadlayay in maalintii shalay ay u qorsheysaneyd in uu u safro Baydhabo, balse lagu wargeliyay in aysan baxeyn wax diyaarad ah, isagoo xusay in maanta uu qorshihiisu ahaa in uu u duulo Magaaladaas laakinse loo diiday.
Ugu dambeyn waxaa uu Madaxweynaha Koofur galbeed ku eedeeyay in uu inkiray malaaqii Beeshiisa ee lahaa saxiixa kursiga Hop#261, isagoo madaxweynaha ka codsaday in uu joojiyo ficilada uu wado Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Hadalka kasoo baxay Madaxweyne hore Shariif Xasan ayaa imaanaya, iyadoo hore looga diiday musharixiin badan in ay ka safraan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, kuwaa oo ku kala wajahnaa deegaanno lagu qabanayay doorashada kuraas ka mid ahaa kuwa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad, xili uu damacoodu ahaa in ay qeyb ka noqdaan xubnaha u tartamaya kuraastaas.
Xildhibaankii ugu horreeyay oo lagu doortay Gaalkacyo.